fanosihosena stainless vy ho an'ny vita amin'ny varahina
Induction Brazing stainless vy ho an'ny varahina fantsona. Ny tanjona dia ny manombatombana vahaolana famotsiam-bolo. Ny mpanjifa dia mitady hampihenana ny kilema ary ho an'ny tontolo fandrobiana madio kokoa.
Noho ny haben'ny fantsona sy ny taham-pivarotana ambany - atao ny fanombanana miaraka amin'ny rafi-pandrefesana amin'ny induction.
DW-HF-25kw milina fanosihosena induction
Tambanana mankany amin'ny fantsona Stainless vy
Temperature: 1400ÂºF mankany 1600ÂºF (760ÂºC mankany 871ÂºC)
Time: 9 ka 11 segondra
Varahina amin'ny vy vy
Ny fitsapana brazing amin'ny induction miaraka amin'ny coil U open dia afaka nandresy ireo ampahany tao anatin'ny 9 ka hatramin'ny 11 segondra ho an'ny tsingerin'ny braze feno.
Ny fiofanana amin'ny Operator miaraka amin'ity fanamboarana ity dia ho kely kokoa.
Sokajy Technologies Tags rafitra varahina mirehitra, bobongolo tsy misy vy, fanala vy tsy misy tanany mba varahina, fantsom-by matevina vy, varahina mirehitra varahina, Fiovan'ny hafanana hafanana varahina, Fiatoana hafanana tsy misy vy, Fitaovana fanosihosena entana, induction brazing machine, Indoneziana mitatatata tsy misy vy, indostrian'ny vy stainless vy, rafitra fanetren-tena, vondron-trano fandrobohana, RF mahavo-bolamena Post Fikarohana